Nke a bụ ezigbo ụgbọelu na ọmarịcha! Anyị apụghị ikwu ihe, na-agbalị ya! Dị Na 13 repaints. Pilot bụ fọrọ nke nta ezigbo,-ele ya anya na-akpụ akpụ! Ikenyeneke mbiet ugbo elu. Ikenyeneke mbiet panel. Great ụda. Ekele ndị dere maka àgwà ọrụ.
The de Havilland Canada DHC-1, a makwaara dị ka Chipmunk (na French chipmunk) bụ a obere monoplane. O mere ka ya mbụ ụgbọ elu on 22 May 1946.
Chipmunk, a abụọ-seater otu-engine ụgbọelu bụ a isi ọzụzụ ugbo elu nke di na isi mbanye nke Royal Canadian Air Force, Royal Air Force na ọtụtụ ndị ọzọ ikuku agha site ukwuu nke post-abụọ World War. The Havilland Chipmunk ekedi akpa ezi ụgbọelu oru ngo post-agha de Havilland Canada.
Taa, ihe karịrị 500 DHC-1 Chipmunk (makwaara dị ka "Chippie") anọgide airworthy.
Onye edemede: Rick Piper, Dave Booker, Saverio Maurri